Astaanta LinkedIn iyo Adeegsiga | Martech Zone
Astaanta LinkedIn iyo Isticmaalka
Axad, Juun 10, 2011 Arbacada, Oktoobar 26, 2011 Douglas Karr
Iyada oo isticmaale cusub lagu daro ilbiriqsi kasta, qiimaha LinkedIn wuxuu u kordhayaa raadinta aadanaha ee laxiriira ganacsiga. Waxaa laga yaabaa in mid ka mid ah tirakoobka xiisaha badan uu yahay in 40% ka mid ah 500 ee la daraaseeyay ay sheegeen inay marar dhif ah riixeen xayeysiinta LinkedIn halka 60% guud ahaan dadka isticmaala ay sheegeen inay gabi ahaanba leeyihiin. Iyadoo leh 100 milyan oo isticmaaleyaal ah isla markaana sii kordhaya, waxaa jiri kara xoogaa faa'iido ah in warshadaha qaarkood ay maal gashadaan xayeysiinta LinkedIn - Waxaan xiiseynayaa waxa khibradaadu ahayd.
Waa kuma Lab42?
Sida laga soo xigtay Lab42 bogga: Lab42 waa habka ugu fudud ee cilmi baarista suuqa macaamiisha loogu sameeyo internetka iyadoo la adeegsanayo shabakadaha bulshada. Haddii aad ku sameysid sahanka internetka qalabkeenna abuurista sahaminta ama aan sameyno, Lab42 wuxuu helaa jawaabeyaasha sahankaaga oo wuxuu keenaa natiijooyin 3 illaa 5 maalmood oo shaqo. Waxaan waxan oo dhan ku qabanaa $ 500 illaa $ 1,000. Taasi waa sax - $ 500.
Fikradayda, ma jiraan wax kadis ah oo weyn oo ka yimid sahankan iyo faahfaahinta Lab42. Si kastaba ha noqotee, waxaad jeclaan kartaa inaad shabakadda maskaxda ku hayso maskaxda marka xigta ee aad rabto inaad tijaabiso qaar ka mid ah xayeysiinta lacag bixinta ah.
WOT waa sumcaddaada?
Jul 10, 2011 markay tahay 4:01 PM
Jeclahay! Tani waxay sii xoojinaysaa aaminsanaantayda in dad badani u isticmaalaan LinkedIn si joogto ah inta aan ka fikirno. Waxaan u maleynayaa in xirfadlayaal badan oo ganacsi ay jecel yihiin LinkedIn in ka badan shabakadaha kale maxaa yeelay kuma jiraan dhammaan "qashinka" iyo sheekaysiga ay shabakadaha kale ku jiraan. LinkedIn waxay sii ahaaneysaa shabakadeyda bulshada ee aan ugu jeclahay 🙂